China 1.5M curve Olimpic bar fekitori uye vatengesi |Yunlingyu
Nhamba yemuenzaniso: YLY - CQG
uremu Net uremu: 8.7kg
huremu huremu: 9.2kg
Packing fiber mudziyo
zvimwe kupa dhayamita: 2.5cm
kureba kwemaoko: 25cm
Kubata dhayamita: 5cm
Kubata urefu: 94.5
Saizi yepakeji 160*10*10cm
YeduOlympic Bars akanakira kukubatsira iwe kukwenenzvera fomu rako uchidzikisa kushushikana pamaoko ako nemagokora.Wedzera zvaunowana uye kunanga muviri wako wepamusoro kuti uvake simba uye mhasuru.Shandisa kune curl, kudzvanya uye maekisesaizi ekuwedzera.
Yakajairwa barbell: Kubva pabarbell bar, Iyo barbell ndiro uye clamp inoumbwa nezvikamu zvitatu.Makwikwi epasi rese mukusimudza uremu anofanirwa kushandisa mabhero epasi rose akatenderwa nemubatanidzwa wepasi rose wekusimudza.Kune marudzi maviri emabhero evarume nevakadzi, mutsauko mukuru ibarbell bar, mabarbell plate ndiwo akafanana.
Bhabhu revarume rakareba mamita 2.20 uye rinorema makirogiramu makumi maviri.Bhawa revakadzi rebarbell rakareba mamita 2.15 uye rinorema makirogiramu gumi nemashanu.Iyo barbell bar ine dhayamita ye0.028 metres.Iyo yakakura barbell sheet ndeye 0.45 metres muhupamhi.Chifukidzo cherabha chinogona kushandiswa kuwedzera chitarisiko uye kuderedza ruzha rwebarbell.
Barbell imhando yemidziyo yekudzidzisa yakakosha, Inoshandiswawo kusimudza uremu.Barbell exercise imhando yekudzidzira uremu.Kungoshandisa mabarbells, kuvandudza simba remhasuru.Iwe unogona zvakare kushandisa mabarbell ekutanga kudzidziswa, kukurudzira kurongeka kwese.
Mabhero ane zvakawanda zvinoshandiswa, angave mapendekete ako, musana wako, maoko ako, chipfuva chako.Nemabarbell uye zvimedu zvesimbi zvehuremu hwakasiyana, shandisa chaiyo tsandanyama simba rekudzidzisa maitiro kakawanda, ita tsandanyama kutsungirira kurovedza muviri wese tsandanyama boka, gadzira mafuta kupisa, shandura kuita mutsara we toned.
Zvakapfuura: Square tube barbell plate trailer rack
Zvinotevera: 2.2M alloy spring steel bar